कुन होला टेलिकमको सस्तो र उपयुक्त डेटा प्याक ? - Tech News Nepal Tech News Nepal
सोमबार, पुष २७, २०७७ २१:०७
कुन होला टेलिकमको सस्तो र उपयुक्त डेटा प्याक ?
काठमाडौं । बजारमा नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्ट सेल गरी तीन वटा कम्पनीले मोबाइल सेवा दिइरहेका छन् । उनीहरुको भ्वाइस तथा डेटामा आ–आफ्नै दर–रेट छ ।
नियमित दर–रेट भन्दा सस्तोमा डेटा र भ्वाइस प्रयोग गर्न सकिने गरी कम्पनीहरुले ग्राहकका लागि नयाँ–नयाँ प्याकेज तथा अफरहरु ल्याइरहेका हुन्छन् । तर, पनि त्यसको विषयमा पूर्ण जानकारी नहुँदा हामी प्याकेज नलिएरै महंगोमा सेवा उपभोग गरिरहेका हुन्छौं ।
जसको प्रतिफल कल तथा डेटामा अनावश्यक रुपमा ठूलो खर्च भइरहेको हुन्छ । सामान्यतया मोबाइल सेवाप्रदायकहरुको भ्वाइस र डेटामा दुई प्रकारको सर्भिस मोडल छ ।
एउटा ‘पे एज यु गो’ अर्थात जति भ्वाइस तथा डेटा प्रयोग गर्‍यो त्यति नै रकम तिर्नुपर्ने । अर्को हो, ‘प्याक मोडल’ । यसमा प्रयोगकर्ताले निश्चित शूल्क तिरेर प्याक किन्नुपर्छ ।
यसमा प्रयोग गरे पनि नगरे पनि पैसा जान्छ । तर, प्याक मोडलमा जाने हो भने ‘पे एज यु गो’ मोडलको तुलनामा सेवा निकै सस्तो पर्न जान्छ ।
डेटा प्याक ‘पे एज यु गो’ र ‘डेटा प्याक’ गरी दुवै मोडलमा उपलब्ध छ । टेलिकमले प्रति दिन एक जीबी प्याक, रातीका लागि अनलिमिटेड प्याक, डे प्याक, साप्ताहिक प्याक, २८ दिने प्याक, फोरजी प्याक आदि विभिन्न प्याक पनि उपलब्ध गराइरहेको छ । जुन एकदमै सस्तो पर्न जान्छ ।
‘पे एज यु ग्रो’ मोडलमा टेलिकमको डेटा प्रयोग गर्दा प्रति एमबी एक रुपैयाँ पर्न जान्छ । तर, प्याक खरिद गरी प्रयोग गर्दा प्रति दुई-तीन पैसामै चलाउन सकिन्छ ।
यदि तपाईं मोबाइलमा धेरै डेटा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने प्याक लिएर सेवा प्रयोग गर्नु नै तपाईंका लागि उपयुक्त हुन्छ । तपाईंहरुले कम्पनीको मोबाइल एप, वेबसाइट अथवा मोबाइलबाट सोझै *१४१५# डायल गरी टेलिकमका विभिन्न डेटा प्याकहरु रोजेर लिन सक्नुहुन्छ ।
झट्ट हेर्दा प्रति एमबी सस्तो देखिए पनि यदि प्याक खरिद गरेर सम्पूर्ण रुपमा खपत गर्नु भएन भने चाहिँ तपाईंलाई प्याक लिएको डेटा महंगो समेत पर्न सक्छ । त्यसैले आफ्नो लागि उपयुक्त डेटा प्याक रोज्नु अघि आफ्नो आवश्यकता र प्रयोगको विषयमा राम्रोसँग सोच्नुहोस् ।
आज हामी तपाईं टेलिकमले उपलब्ध गराइरहेका विभिन्न डेटा प्याकहरु मध्ये तपाईंका लागि कुन उपयुक्त हुन सक्छ भन्ने विषमा चर्चा गर्दै छौं ।
फोरजी नेटवर्कमा मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने गरी ल्याइएको यो प्याकेजमा १ देखि २८ दिनसम्मका विभिन्न विकल्पहरु दिइएको छ ।
जसमा सबैभन्दा सस्तो दर भनेकै २५ रुपैयाँमा एक दिनका लागि ४०० एमबी डेटा हो । जसका लागि प्रति एमबी ६.२५ पैसा पर्न आउँछ ।
अवधि भोलुम मूल्य दर
१ दिन १०० एमबी १५ १५ पैसा
१ दिन ४०० एमबी २५ ६.२५ पैसा
७ दिन १ जीबी १०० १० पैसा
२८ दिन ३ जीबी २६० ८.६७ पैसा
बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म प्रयोग गर्न सकिने गरी टेलिकमले डे प्याक उपलब्ध गराइरहेको छ । दुई वटा मात्र विकल्प रहेको यो प्याक अन्तर्गत सस्तोमा ६ पैसा प्रति एमबीका दरले डेटा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
भोलुम मूल्य प्रति एमबी
२५० एमबी १५ ६ पैसा
१२० एमबी १० रुपैयाँ ८.३३ पैसा
अल टाइम डेटा प्याक
यसअन्तर्गत कम्पनीले ८०० रुपैयाँमा २८ दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिने गरी १६ जीबी डेटा दिइरहेको छ । जसअनुसार प्रति जीबीका लागि ५० रुपैयाँ तथा प्रति एमबीका लागि ५ पैसा पर्न आउँछ ।
यो प्याकेज नै यस अन्तर्गतको सबैभन्दा सस्तो विकल्प हो । अल टाइम डेटा प्याक अन्तर्गत तपाईंले १ दिन, ३ दिन, ७ दिन र २८ दिनका विभिन्न प्याकेज रोजेर लिन सक्नुहुन्छ ।
जसमा तपाईंले जति थोरै अवधि र मूल्यको प्याक रोज्नु भयो, त्यसै आधारमा प्रति एमबी ५ पैसादेखि १५ पैसा मूल्य पर्न जान्छ । यस अन्तर्गतका प्याक लिन *1415# डायल गरी अटमन हुँदै अलटाइम डेटाप्याकभित्र जान सक्नुहुन्छ ।
अवधि भोलुम मूल्य रु प्रति एमबी
१ दिन २५० एमबी २५ १० पैसा
३ दिन ५०० एमबी ६० १२ पैसा
७ दिन ८०० एमबी १०० १२.५ पैसा
२८ दिन २.५ जीबी २८० ११.२ पैसा
२८ दिन ७ जीबी ५०० ७.१४ पैसा
२८ दिन १६ जीबी ८०० ५ पैसा
लार्ज डेटा प्याक
टेलिकमले लामो समयका लागि धेरै डेटा लिन चाहने ग्राहका लागि लार्ज अर्थात ठूलो डेटा प्याक समेत ल्याएको छ । जसमा सबैभन्दा सस्तो विकल्पको रुपमा प्रति एमबी ५ पैसा पर्न जान्छ ।
कम अवधिका अन्य प्याकेजमा डेटा प्रयोग गर्न नपाउँदै समयावधि समाप्त भइरहेको हुन्छ । तर यसमा लामो समयावधि रहने भएकाले त्यस किसिमको चिन्ता रहँदैन ।
अर्थात एक पटक डेटा प्याक लिइसकेपछि दुईदेखि चार महिना ढुक्क भइन्छ । यदि प्याक खपत नगर्दै सकिने चिन्ता छ भने अग्रिम रुपमा धेरै रकम तिर्नुपरे पनि यो तपाईंका लागि सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ ।
अवधि भोलुम मूल्य प्रति एमबी
६० दिन ३० जीबी १६०० ५.३३ पैसा
१२० दिन ६० जीबी ३००० ५ पैसा
प्रति दिन एक जीबी डेटा
यस अन्तर्गत टेलिकमले ८५० रुपैयाँमा प्रति दिन एक जीबी डेटा २८ दिनसम्म उपलब्ध गराउँदै आएको छ । जसअनुसार प्रति जीबी डेटाका लागि ३०.३६ रुपैयाँ तथा प्रति एमबी ३.४ पैसा पर्न आउँछ ।
साथै कम्पनीले यो प्याकेजमा २८ दिनसम्म प्रति दिन १४ मिनेट नेटवर्क भित्र कुराकानी गर्न सकिने गरी कूल ३९२ मिनेट नेट भ्वाइस बोनस समेत दिइरहेको छ । कम्पनीले २५० रुपैयाँमा सात दिनसम्म प्रति दिन एक जीबी डेटा उपलब्ध गराउँछ ।
यो प्याक लिँदा प्रति जीबीका लागि ३५.७१ रुपैयाँ तथा प्रति एमबीका लागि ३.५७ पैसा पर्न आउँछ । यसमा पनि एक हप्तासम्म प्रति दिन १४ मिनेट गरी कूल ९८ मिनेट नेट भ्वाइस कल बोनसको रुपमा उपलब्ध छ ।
जब कि एक दिनका लागि मात्र यो प्याकेज लिँदा एक जीबीको ४५ रुपैयाँ तथा प्रति एमबीको ४.५ पैसा खर्च लाग्छ । तर यसमा भने भ्वाइस कल बोनसको रुपमा दिइएको छैन ।
१ दिन १ जीबी ४५ ४.५ पैसा
७ दिन ७ जीबी+ ९८ मिनेट भ्वाइस २५० ३.५७ पैसा (बोनस ९८ मिनेट भ्वाइस)
२८ दिन २८ जीबी+ ३९२ मिनेट भ्वाइस ८५० ३.४ पैसा (बोनसमा ३९२ मिनेट भ्वाइस)
स्टे कनेक्टेड प्याक
टेलिकमले कोभिड १९ को महामारिको समयलाई लक्षित गर्दै ल्याएको यो प्याक अझै कायम छ । जुन कम्पनीका उपलब्ध डेटा प्याक मध्ये सबैभन्दा सस्तो विकल्प हो ।
यसमा तपाईंले प्रति मिनेट २ पैसामै मोबाइल डेटा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । तर यसमा उपलब्ध डेटा मध्ये धेरै जसो डेटा फोरजी नेटवर्कमा मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
यदि तपाईं फोरजी कभरेज भएको स्थानमा हुनुहुन्छ र धेरै डेटा आवश्यक पर्छ भने यो नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हो । यसमा तपाईंले चार पटक सात दिने प्याक लिँदा समेत २८ दिनका लागि ८०० रुपैयाँ मात्र तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
५ दिन ४ जीबी (१ जीबी अलनेट+ ३ जीबी फोरजी) १०० २.५ पैसा
७ दिन १० जीबी (२ जीबी अल नेट+ ८ जीबी फोरजी) २०० २ पैसा
यदि तपाईं युट्युव वा फेसबुक मात्र चलाउने गरी डेटा प्याक खोजिरहनु भएको छ भने टेलिकमले त्यसको विकल्प समेत दिएको छ । जसमा तपाईंले अन लिमिटेड रुपमा फेसबुक तथा युट्युव प्रयोग गर्ने सुविधा समेत पाउनु हुनेछ ।
अवधि भोलुम मूल्य
३ दिन अनलिमिटेड फेसबुक ५५ रुपैयाँ
३ दिन अनलिमिटेड युट्युव ५५ रुपैयाँ
३ दिन १ जीबी फेसबुक/युट्युव १५ रुपैयाँ
एक रात मान्य अवधि रहेको यो प्याकेजको मूल्य २० रुपैयाँ राखिएको छ । यसमा तपाईंले एक जीबीसम्म नियमित गतिमा र त्यसपछि सीमित गतिमा डेटा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
यो डेटा प्याक राति ११ बजेदेखि बिहान ६ बजेको बीचमा प्रयोग गरी सक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी एक घण्टासम्म प्रयोग गर्न सकिनेगरी अनलिमिटेड डेटा प्याक समेत लिन सक्नुहुन्छ ।
जसमा तपाईंले २० रुपैयाँमा एक घण्टा अवधिभर अनलिमिटेड कल, डेटा तथा एसएमएस सेवा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
टेलिकमको पोस्टपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताले हरेक महिना मोबाइलमा रेन्टल चार्जको रुपमा न्युनतम ३८४ रुपैयाँ खर्च गर्नै पर्ने हुन्छ । यदि तपाईंले कुनै पनि सेवा लिनु भएन वा अन्य भ्वाइस तथा डेटा प्याक मात्र प्रयोग गर्नु भयो भने पनि छुट्टै रेन्टल चार्ज लाग्ने गर्दछ ।
यस्तोमा सहजताका लागि टेलिकमले पोस्टपेड प्याक ल्याएको हो । जसमा तपाईंले ३८४ रुपैयाँको बेसिक प्याकेज लिनु भयो भने एक महिनाका लागि ८ जीबी डेटा पाउनु हुनेछ ।
जसअनुसार प्रति एमबी ४.८ पैसामा डेटा प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यसो त ५९९ रुपैयाँमा उपलब्ध प्राइम प्याकेजमा समेत ६ जीबी डेटा उपलब्ध छ । यसमा ६ जीबी डेटासँगै ४०० मिनेट अन नेट तथा ५० मिनेट अफ नेट र २०० वटा एसएमएस समेत दिइएको छ ।